Galmudug oo ka hadashay Ciidamo la wareegay Madaxtooyadda Cadaado – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa War ka soo saaray weerar ay ciidamada Danab iyo NISA ay kula wareegeen Xarunta Madaxtooyada Galmudug ee ku taalla magaalada Cadaado.
Agaasimaha Madaxtooyada galmudug Maxamed Cabdi Aaadan oo shir Jaraa’id ku qabtay Magalada Gaalkacyo ayaa sheegay in xilligan ay nasiibdarro tahay in iyada oo dowladda Federaalka ay sugi weysay amniga Muqdisho oo maalin walba dadka lagu dhameynayo in ay weerar kusoo qaado Galmudug sida uu hadalka u dhigay.
Waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in Maamulka Galmudug uu amar ku siinayo ciidamada Daraawiishta,iyaga oo fulinaya amarka Madaxweynaha Galmudug ay ka feejignaadaan waxyaabah adowladda Federaalka ka wado deegaanada Galmudug,sidoo kalena aan loo dul qaadan doonin.
Xalay ayay aheyd markii ciidamo farabadan oo ka tirsan kuwa NISA ay si awood ah kula wareegeen Xarunta Madaxtooyada Galmudug ee ku taalla magaalada Cadaado,waxaana arrintaan ay timid kadib markii dhawaan Madaxweyne Xaaf uu sheegay in dowladda Federaalka ay damacsan tahay inay kusoo weeraro Ciidamada ku sugan deegaanada Galmudug.